अर्थ/बजार आइतबार, पुस १, २०७५
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउँदै १ माघ २०७१ बाट निर्माण शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबै अवस्था सामान्य रह्यो भने भदौ २०७६ देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ।
तोकिएभन्दा दोब्बर अवधि लगाएर बन्न लागेको विमानस्थलको हालसम्म ५८ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम नयाँ धावनमार्गबाट चैतदेखि आन्तरिक र भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विमानस्थल सञ्चालनको दिन नै तोकेर फागुनमा एयरलाइन्स कम्पनीलाई भैरहवामा उडानको समय (स्लट) लिन आह्वान गर्नेछौं।”
हाललाई प्राधिकरण आफैंले विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि भविष्यमा तेस्रो पक्षलाई सञ्चालन जिम्मेवारी दिनेबारेमा समेत छलफल भइरहेको महानिर्देशक गौतम बताउँछन्। निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म जग्गाको मुआब्जामा करिब रु.२३ अर्ब, पूर्वाधार निर्माणमा रु. ६ अर्ब २२ करोड, उपकरणहरुमा रु.९३ करोड खर्च हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
जग्गा अधिग्रहणको रकम नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी हो भने पूर्वाधार र उपकरण जडानका लागि एशियाली विकास ब्यांकले करिब रु. ६ अर्ब १३ करोड ऋण लगानी गरेको छ।
१९ मंसीरमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा लिन विमानस्थल निर्माण कार्यालय, भैरहवा पुगेका स्थानीय बासिन्दा विमानस्थल अबको ९ महिना भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने पत्याइरहेका थिएनन्। तिनैमध्येका एक रामप्रसाद ठाकुर (५९) भन्छन्, “सबै काम सकिँदा अझै एक-डेढ वर्ष त लाग्ला।”
अर्का स्थानीयवासी चन्द्रप्रसाद गिरी (५४) पनि अगामी भदौबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेमा आश्वस्त छैनन्। तर, विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी ६ महीनाभित्र २२ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण र २० प्रतिशत उपकरण जडानको काम सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने दाबी गर्छन। उनी भन्छन्, “धावनमार्गको काम फागुनभित्रै सकिन्छ, प्रशासनिक र टर्मिनल भवनको काम जेठभित्र सम्पन्न हुन्छ। उपकरण जडानका लागि पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन्। भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गर्ने तयारीमा छौं।”
विमानस्थलमा ३ हजार मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको धानवमार्ग निर्माणाधीन छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै बराबरको धावनमार्ग निर्माण भइरहेको छ। हाल आन्तरिक उडानका लागि प्रयोग भइरहेको भैरहवा विमानस्थलको १५०० मिटर लम्बाइ र २३ मिटर चौडाइको धावनमार्गलाई ‘ट्याक्सी वे’ बनाउने योजना छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानहरू भैरहवा भएर नेपाल भित्रिन र बाहिरिन मिल्ने गरी हवाई रुट बनाउने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आयोजनाको डिजाइनदेखि नै निर्माण प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “विगतमा ठेकेदार कम्पनी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा काम प्रभावित भएको थियो। अब पनि काम ढिलो भयो भने त्यसको कारण राजनीतिक नै हुनेछ।”
निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने कारण नभएको र हुन पनि नदिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अबको ९ महीनामा विमानस्थल नबन्नु भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको कामसमेत रोकिनु हो, त्यसले भिजिट नेपाल २०२० कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ। विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलो गर्ने छुट कसैलाई छैन।”